लेखनलाई विद्रोहको माध्यम बनाए - साहित्य - साप्ताहिक
रमेश सायनले युवा कविका रूपमा आफ्नो बलियो पहिचान बनाइसकेका छन् । अनलाइन र केही पत्रपत्रिकामा फाट्टफुट लेखिरहने रमेश यसपालि निबन्धकारका रूपमा झुल्किएका छन् । बजारमा आएको केही समयभित्रै उनको छुटेका अनुहारले बेग्लै छाप छोडिसकेको छ । रमेश कुनै कुरा नलुकाई नढाँटी सत्य कुरा लेख्न चुकेका छैनन् ।
छुटेका अनुहार शीर्षक कसरी जुराउनुभयो ?
यो पुस्तक, म बाँचेर आएको समयबाट निर्मित भएको हो । पुस्तकभित्र यस्ता अनुहारहरू छन् जो सधैं सँगै हिंड्न सकेनन्, छुटिगए । कोही राजनैतिक हिसाबले छुटे, कोही शैक्षिक हिसाबले छुटे, कोही सामाजिक, अर्थिक हिसाबले छुटे । कुनै न कुनै हिसाबले छुटे । त्यही भएर पुस्तकको शीर्षक छुटेका अनुहार भयो ।
पुस्तक बजारमा आएपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । थोरै सोचेको थिएँ, धेरै पाएँ । थोरै सोचेर धेरै पाउनुको खुसीमा छु अहिले ।
प्राय: कुन समयमा लेख्नुभयो ?
मेरो लेख्ने निश्चित समय छैन । लेख्ने विषय धेरैजसो यात्राका क्रममा सोचें । सोचेको कुरा घरमा जुनसुकै बेला पनि लेखें ।
अरूसँग रिसाउने तर झगडा गर्न नसक्ने । समाजमा भएका अनेक विषयसँग रिसाउने तर चिच्याएर अभिब्यक्त गर्न नसक्ने । यस्तो बेला लेखेर शान्त हुन्थें । सुरुका दिनमा लेखनलाई रिस वा विद्रोहको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरें । पछि लेखन बानी भयो ।
कस्ता खालका पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ ?
समयअनुसार रुचि पनि फेरिँदो रहेछ । पहिले–पहिले फिक्सन पढ्थें । अचेल ननफिक्सन पढ्छु । इतिहास तथा यात्रासम्बन्धी पुस्तकमा रुचि छ ।
स्कुल, कलेज पढ्दा जीवनमा के बन्ने सपना पाल्नुभएको थियो ?
म यस्तो परिवारमा हुर्किएँ कि स्कुल पढुन्जेल के बन्ने भनेर सपना देख्नुपर्छ भन्ने नै भएन । कुनै सपनै थिएन । पछि समयले जे–जे बनाउँदै गयो त्यही–त्यही बन्दै गएँ ।
लेख्न बस्दाका आनिबानीबारे बताइदिनुस् न ।
लेख्न बस्दा कहिलेकाहीँ एकदमै छट्पटी हुन्छ । लेख्दा–लेख्दै एक दुइ लाइन राम्रो लेखें भनें जुरुक्क उठेर घरका कोठाहरू चहार्छु । भान्सा पस्छु । चिया पकाउँछु । कहिलेकाहीं एक चक्कर गाउँ पनि डुल्छु । अनि फेरी आएर लेख्न थाल्छु ।
तपाईको प्रिय विधा ?
कविता, कविता भएन भने अरु कुनै बिधाको स्वाद हुँदैन ।
तपार्इंका प्रिय लेखक को हुन् ?
लेखक भनेको व्यक्ति हो । ब्यक्ति मन पर्नु–नपर्नु फरक कुरा हो । एउटै लेखकबाट लिखित फरक–फरक पुस्तकमध्ये कुनै एउटा वा दुइटा पुस्तक मात्र पनि मन पर्न सक्छ । जस्तै मलाई नयनराज पाण्डेको लू असाध्य मन पर्छ । मोहन मैनालीको उपल्लो थलो तथा मान्ठा हराएको जुग मन पर्छ । यी उदाहरण मात्र हुन् ।
यो आफ्नो रुचिमा भर पर्ने कुरा हो । मेरो सिफारिस खासै छैन । मेरो रुची यात्रा सम्बन्धी पुस्तकमा छ, त्यसैले नेपाली पुस्तकमा मोहन मैनालीका पुस्तकहरू पढ्नुस् भन्छु ।
लेख्न चाहेको तर लेख्न नसकेको विषय केही छ कि ?
थुप्रै छन् नि । जस्तै एउटा शरणार्थीको संघर्षको कथा लेख्न रहर छ ।